HeersareMuxumed: Hargeysa: Caasimad Dhismaysa Oo Bilic U Baahan + Sawirro
Hargeysa: Caasimad Dhismaysa Oo Bilic U Baahan + Sawirro
Waxa muddooyinkan la arkaa in Hargeysa noqotay magaalo cagta saartay jidkii horumarka iyo dhismaha. Waxay si mug leh uga soo kabanaysaa burburkii dagaallada iyo duqaynta. Qof kasta oo hayntiisu u saamaxaysaa wuxuu geliyey dhisme amma dhul. Dadka qaar waxay ganacsi ba ka dhigteen dhismeyaasha iyo dhulka oo la sii iibiyo. Magaalada gudaheedii inta la iskala tegay ayaa darafyada la sii socdaa.
Waxa hadda lagu tartamayaa hirgelinta dhismeyaasha dhaadheer ee dabacyada loo yaqaanno. Muraayadaha iyo alyuuminamka quruxda badan ee dabaqyadaa lagu qurxiyey waa kuwo ku soo jiidanaya. Waxa la duminayaa dhismeyaal duugoobay oo muddo hore la dhisay laguna beddelayo kuwo bilic leh kana mug weyn intii hore. Dhismeyaashu waa kuwo isugu jira qaar shirkado dhisanayaan iyo kuwo dadku dhisanayaan ba.
Waqtiyadii Hargeysa soo martay iyo burburkii ay ka dhaxashay dagaalada dalka ka dhacay iyo halka ay xilligan joogto marka aad is barbar-dhigto waxa kuu soo baxaya in la sameeyey dadaal xilkasnimo ku dheehan tahay. Waxay ka soo kabatay baaba' laxaad leh oo ku habsaday. Waxaana dhismeyaasha ugu casrisan la sameeyey tobankii sano ee u danbeeyey.
Inkasta oo Hargeysi dhisantay, ballaadhantay isla markaana hareeraha u fidday haddana waxay baahi weyn u qabtaa bilicdii ay caasimadi yeelan lahayd. Walaw ay golayaashii kala danbeeyey ee Hargeysa soo maray ay dadaallo badan oo ay bilicda magaalada wax kaga qabanayaan sameeyeen, haddana weli baahidaasi way taagan tahay oo waxay u baahan tahay qorshe iyo istaraatiijiyad xooggan oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada. Mushkiladaha ugu badan ee bilicda dhaawacaya waxa ka mid ah qashinka oo meelo badan oo aan loogu talo gelin lagu daadiyo.
Xilliyada uu roobku dayo oo magaaladu wada daad noqonayso iyo biyo magaalada dhex fadhiista. Arrintanina waxay markhaati ka tahay baahida weyn ee loo qabo in la helo biyo-mareeno “drainage” si daadka faraha badan ee magaalada dhex qulqulaya xal loogu helo.
Sannadkii aynu ka soo gudubnay ee 2013kii wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Warancadde wuxuu hirgeliyey digteero uu ku badhitaarayay sidii loo horumarin lahaa bilicda magaalooyinka waa weyn ee dalka oo caasimaddu ugu horrayso. Meelo badan oo Hargeysa ka mid ah dur ba waa laga dareemayaa in bilicdu isa soo beddelayso oo qaar ka mid ah meheradaha ku yaalla faras-magaalubu waxay hortooda dhigeen marar waddada qurux u yeelaya oo meesha ka saaraya ciddii tuulnayd ee dadka dhibaatada ku haysay.
Markasta golaha deegaanka ee Hargeysa way sheegaan inay wax ka qabanayaan kor-u-qaadista bilicda magaalada oo waxa laga arkaa iyadoo wax qabanaya, haddana waxa la dareemayaa in wax badani ka dhiman yihiin. Waxay se isweydiintu tahay ma awood dhaqaale ayaanay u lahayn? Ma aqoonteedii ayaanay lahayn? Ma waxa aanay haysan qalabkii wax lagu qaban lahaa? Mise iyagaa dadaalkooda gabay? Kollay waa su'aalo iyaga hor yaalla inay caddeeyaan.
Marar badan waxa aad arkaysaa xoolo qashin dhex daaqaya sida lo' amma riyo. Kuwaasoo waxay cunaan ka dhex raadinaya goobaha qashinka lagu daadiyo. Dhawr jeer oo hore ayay dawladihii hoose ee kala danbeeyey ay go'aanno ka soo saareen xoolahaas, in magaalada laga saaro amma loo sameeyo xerooyin amma goobo kale oo ku habboon dhaqashadooda balse go'aannadaasi mar walba muddo gaaban ka dib waxay noqonayeen kuwo hagaasa oo aanan hana-qaadin.
Waxa xoolaha ka daran oo magaalada meel kasta lagu arkayaa Ey raxan-raxan ah oo xaafadaha qaar dhibaatooyin ku ah, iyadoo meelaha qaar aad ku arkayso qaar xanuusanaya oo aragoodu aad u liito. Eydaasi waa kuwo mar ba marka ka sii danbaysa sii badanaya isla markaana ku tarmaya xaafadaha iyo meelaha faras-magaalaha ee caasimada ku yaalla.
Xoolaha iyo eyda faraha badan ee magaalada ku sugani waa kuwo u baahan in loo sameeyo qorshe iyo qaab wax looga qaban lahaa, waa marka laga fikirayo hagaajinta iyo horumarinta bilicda magaalada, iyadoo fiiro gaar ah la siinayo haddii aan xoolaha laga maarmayn oo in loo dejiyo qaab hufan oo dadka lehi ay haysan karaan oo aan bilcda wax badan yeelayn.
Maamulka dawladda hoose oo keliya uun xil ka ma saarna bilicda magaalada, laakiin waxa aad arkaysaa qof fooq cad dhitsay oo haddana qashin hoos yaallo, dhir aan lagu beerin isla markaana aan deegaan wanaagsan loo yeelin. Qof kastaa haddii uu qashinka meelaha loogu talo galay dhigo, gurigiisa hortiisa hagaajiyo, dhir ku beero, nadaafadda ilaaliyo, waa hubaal inay wax badan iska beddelayaan bilicda magaalada. Waxaana mudan qof kastaa inuu isdiro si bilicdu u wanaagsanaato oo Hargeysa uga baxdo; “magaalo dhismaysa oo bilic u baahan.”
Posted by HeersareMuxumed at 1:27 PM
Adams Kevin September 13, 2014 at 9:14 AM
Solusi cepat kaya November 19, 2016 at 9:37 PM
Johnson April 6, 2015 at 5:49 PM
Waxaan bixinaa cayn kasta ah oo amaah @ 3%, siday u kala horreeyaan. codsan
Hadda in ay ka jawaabaan.
muddo of time:
Haddii ay sidaas tahay, fadlan igala soo xidhiidh e-mail: westerrnunionagency1@outlook.com
Johnson April 6, 2015 at 5:50 PM
Lance Johnson April 25, 2015 at 10:00 PM
Thanks for your response to our announcement of the loan, have you been turned down by banks? Is your credit so bad that, your bank or any loan company won't help you out with a loan? Or do you simply need financial assistance to help you live a better life? Worry no more. We Offer Loans from $3,000.00 Minimum to $1,000,000.00 Maximum at 3% interest rate.
NOTE: All replies should be forwarded to the Company's transferring agent for inquiries via E-mails: lancegrayloan@hotmail.com
Name: ......................... .........
Other Name ( s ) : ...............................
Marital Status: ..............................
Contact Address: .............................
Date of Birth: ...............................
Amount needed as
Monthly income: ..............................
Purpose for Loan: ............................
Phone number: .................................
Have you request a loan before:.....
How did you ............
hear about us? ...................
Johnson April 6, 2015 at 5:53 PM
Johnson April 6, 2015 at 5:55 PM
Lance Johnson April 25, 2015 at 10:01 PM
Gacaliye Sir / Ma,
Waad ku mahadsan tahay in aad jawaab u dhawaaqay of amaah Ilaaheenna, ayaa aad loo diiday by bangiyada? Ma aad credit si aad u xun, bangigaaga ama shirkadda kasta oo amaah ma kaa caawin doona la amaah ah? Mise waxaad si fudud u baahan tahay gargaar dhaqaale oo kaa caawinaya in aad ku noolaato nolol ka wanaagsan? Mar dambe ma welwelin. Waxaan Sii Deynta Ugu Yar $ 3,000.00 in $ 1,000,000.00 ugu at dulsaarka 3%.
Nala soo xiriir haatan amaahda degdeg ah!
FIIRO GAAR AH: Dhammaan jawaabaha waa in loo gudbiyaa wakiilka wareejinta ee Company ee weydiimaha via E-mails: lancegrayloan@hotmail.com
Foomka Codsiga Loan
Magaca: ......................... .........
Magaca Kale (s): ...............................
Xaaladda Guurka: ..............................
Xiriirka Address: .............................
Lacagta loo baahan yahay sidii
Dakhliga bishii: ..............................
Ujeedo u Loan: ............................
Lambarka taleefoonka: .................................
Ma waxaad codsan amaah ah ka hor: .....
Sidee baad u sameeyey ............
maqlo na ku saabsan? ...................
Morgan Debra May 15, 2015 at 7:10 AM
Hello Am Mrs, Morgan Debra Am amaahiye amaah sharci ah oo lagu kalsoonaan karo siin deyn
on a eego cad oo la fahmi karo iyo xaaladda dulsaar 2%. Laga soo bilaabo
$ 12000 in $ 7000000 USD, Euro Markaasuu oo ginni oo keliya. Waxaan bixin Business Deymaha,
Daymaha shaqsiga, Amaahda Ardayda, Deyn gaariga iyo Deyn bixin biilasha. Haddii aad
u baahan tahay si amaah ah waxa ay tahay inaad sameyso yahay, waayo, waxaad si toos ah ii soo xiriir
Fiiro gaar ah: Dhamaan reply waa in la soo dir: morgandebra1986@gmail.com
http://warungkta.blogspot.com June 2, 2015 at 8:25 AM
Waxaan nahay Christian Organization sameeyay in lagu caawiyo dadka baahida caawisaa, sida help.So dhaqaale haddii aad ku dhaxjiraan dhibaato dhaqaale ama aad ku sugan tahay wax qasan dhaqaale, iyo inaad u baahan tahay lacag ay ku bilaabaan ganacsi kuu gaar ah, ama aad u baahan tahay si amaah ah degaan aad deynta ama bixinta biilasha, bilawdid ganacsi fiican, ama aad ay ku adkaatay in la helo si amaah ah caasimada ka bangiyada deegaanka, nala soo xiriir via email maanta mrsclarasmithloanfiirm@gmail.com u Kitaabku waxa uu leeyahay "" Luukos 11:10 Mid kasta oo kan weyddiista waa la siiyaa; kii doonaana waa helaa; iyo kii garaacana in, albaabka laga furi doonaa "Sidaas ha fursad kuwaas oo ay aad u gudbin, waayo, Ciise waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiiba dheeraad ah fadlan kuwan waxaa loogu talagalay halis ah maskax iyo Ilaaha Dadka ka baqaya.
Valid Telefoonka Gacanta Number:
Waad ku mahadsan tahay fahamkaaga la xidhiidh inay aad sida aan sugi
wellington December 18, 2015 at 4:24 PM
Halkan waa meesha ay amaah ah ayaa diyaar u ah dadka doonaya in la dhiso ka baxsan caasimada. hadafkeenu waa kaa caawiya si aad umalaha in aad riyo nolosha, maxaa yeelay, kor u saboolnimada waa laydiin yeedhay oo qaadashada costumer si ay u guulaystaan waa magaca Sidaa darteed u yimid inuu meliswellingtonmicrofinace@gmail.com meesha aad gargaarka waxa laguu soo raadinaya heli doonaa. amaah aan rahaamad waa waxa siin doonaa in ay naga costumer sababtoo ah waxaan ognahay in bulshada kharribmayo maalin kasta taasina waa sababta aannu shirkadda dhaqaale ay go'aansato in ay jiri waayo, bal yaa weligiis u diyaar u yahay inuu wax amaahisaan naga oo aan waxba kaliya aad wax deymisay waa lacag, laakiin waxaan sidoo kale u arkaysaa afair ee ku saabsan sida lacagta loo isticmaalay si loo yareeyo khatarta laga badiyay, aan waa hore u sameeyey, waayo, qaar kale oo ka shaqeeyaan iyo kuwiinna ma ahaan doonaan kuwa reeban
* Ma u baahan tahay amaah degdeg ah?
* Mothly bixinta bilaabi 8 bilood gudahood ka dib marka aad soo ururiyay amaahda on xisaabtaada bangiga.
* Dulsaarka Low 2%
* Bixinta muddo-dheer (1-30 sano) muddo.
* Shuruudaha amaah debecsan iyo lacagta bil kasta.
* Muddo intee le'eg bay qaadataa in lagu maalgeliyo? Ka dib markii codsiga amaah gudbisatay
Waxaad filan kartaa jawaab horudhac ah in ka yar 24 saacadood, iyo ***.
*** Maalgalinta 72-96 saacadood gudahood ka dib markii la helo xogta aan u baahanahay.
ka aad hadda Nala soo xidhiidh
Dr Purva Pius July 25, 2016 at 1:57 AM
Clara Fredrick August 8, 2016 at 4:24 PM
Hello, halkan at qiimaha macquulka ah in la beddelo doonaa nolosha weligeed ah amaah yimaado, Anigu waxaan ahay Mr. Patrick Frederick amaahiya amaah shahaado, waxaan kuu soo bixin deynta qaybta shakhsiga iyo dadweynaha in ay u baahan yihiin kaalmo dhaqaale in aad bixisid dulsaar yar ee 2%. Adeegyada Our ka mid ah: Amaahda Personal * * xoojinta deynta * Amaahda Ganacsiga * amaahda waxbarashada * mortgage * deyn xaqiijisatay * amaah aan caymis * amaahda * Maalinta mushaarka baxay * Ardayga Amaahda * Business Amaahda * Amaahda * Auto Amaahda * deyn Investment * horumarinta * deyn iibsan qoray dhismaha deyn fadlan buuxi foomka hoose kuna soo celi haddii aad xiisaynayso, daymaha (patrickloans15@gmail.com) Patrick shahaado iyo shirkadda amaah lagu kalsoonaan karo, codsan maanta iyo maanta xalinta dhibaatada dhaqaale. Xusuusnow caydh ah 1) magacyada oo dhan: 2) Country: 3) wax looga qabto 4) Gender: 5) Status: 6) Shaqada: 7) Telefoon: 8) dakhliga billaha ah: 9) amaah loo baahan yahay: 10 qadar) Loan Duration: 11) The Ujeedada ee amaahda: 12) Facebook magaca: 13) sida ugu dhakhsaha badan sida kor ku xusan yahay buuxinta foomka, waxaan kuu soo diri doonaa shuruudaha amaahda iyo xaaladaha, si aan u sii wado. Weeraryahanka in maqalka aad ka si ay horay u socdo waxaan eegi doonaa. Salaamaha, iyo e-mail: patrickloans15@gmail.com. ku mahadsan tahay
Zuma Loans October 5, 2016 at 11:23 PM
Ma u baahan tahay Loan ah?
Ma waxaad raadineysaa Maaliyadda?
Ma waxaad raadineysaa Loan ah inay u ballaadhiyo ganacsigaaga?
Waxaan qabaa waxaad u timaadeen inaad goobta saxda.
Waxaan bixinaa Amaahda ee dulsaarka hooseeyo.
dadka daneynaya waa fadlan nagala soo xiriir
Si dhakhsi ah jawaab u codsigaaga, Fadlan,
jawaabtaa emails this hoos ku qoran oo kaliya.
(Zumaloans@mail.com ama zumaloans@gmail.com)
Fadlan, ha na siiyaan macluumaadka soo socda haddii aad xiisaynayso.
1) Magaca buuxa: .........
2) Gender: .........
3) Inta Loan loo baahan yahay: .........
4) Loan Duration: .........
5) Country: .......
6) Cinwaanka Guriga: .........
7) Number Mobile: .........
8) Dakhliga Billaha: .....................
9) Shaqo: ...........................
) Kuwee goobta aad ku samaysay halkan nagu saabsan .....................
Thanks iyo tixgalin.
janny hamy October 22, 2016 at 3:13 PM
Hello sidee tahay maanta iyo rajeynayaa daqiiqad wanaagsan waxaan rabnaa in aad ogaato in aanu kaa caawin kara si aad u hesho biilasha off haddii keliya aad ku jirto heshiiska ka dib markii idin siiyey fund codsaday sidii aad by loo baahan yahay in ay tahay in aad dib noogu abaal marin kaliya xilliga soo socda la siiyey waqti gudahood ka.
Waxaan bixinaa noocyada soo socda ee amaahda: -
amaah Deynta / xoojinta ilaa 90.000.000 $
Amaahda Business ilaa 1000.000.000 $
Amaahda Personal ilaa 50,000.00 $
Home Loan ilaa 250.000.000 $
Auto Maaliyadda ilaa 750 000 $
amaah Investment ilaa 2.000.000.000 $
Loan Fess School 150,000.00 $
Haddii aad u baahan fund deg-deg ah oo diyaar u ah inuu dib ugu abaalgudo gudahood ka ee muddada soo socda siin waqti, haddii xiiso dib noogu si aad u hesho.
C.E.O Mrs Janny Panny.
Robertfinance company October 25, 2016 at 8:55 AM
MA U BAAHAN TAHAY amaah ah?
Uma baahnid in aad ka walwasho, waxaan ka dhigi farqiga u ah in
adeegyadayada ka mid ah amaah shakhsi ah, amaah ganacsi, amaah baabuur,
amaah guryaha, iyo iskaashi ganacsi.
lacagta amaah our in pounds Dollar, oo Euro u dhaxeysa 2000 in
Si 100,000 shakhsiyaadka iyo 100,000 1,000,000 for co.operate
ururka. dulsaarka waa sida raqiis ah sida 1.5%.
All aad u baahan tahay inaad samayso waa kaliya in ay na siiyaan waraaqo sax ah by buuxinta foomka codsiga our Credit / Loan in dambayso
xaqiijinta, xaqiijinta iyo xaqiijinta kooxdeena. approvers geedi socodka waa in ka yar 48hours.
Nala soo xiriir xagga email hoose (Robertfinance616@gmail.com)
Robertfinance company October 25, 2016 at 8:56 AM
Jones Smith November 9, 2016 at 2:19 PM
amaah! amaah !! amaah !!!
Ma waxaad raadineysaa shirkad amaah ah sumcad iyo la aqoonsan yahay ee gaarka loo leeyahay kuwaas oo deyn inay fursad waqti nolosha siiya. Waxaan ku siin dhan nooc oo amaah ah hab aad u sahlan oo dhakhso ah, amaah shakhsi ah, amaah baabuur, Home Loan, Loan Student, Loan Business, amaah maalgashiga, xoojinta deynta, iyo in ka badan. Ma waxaad la diiday by bangiyada iyo hay'adaha kale ee dhaqaale? Ma u baahan tahay si amaah ah xoojinta ama mortgage ah? mar dambe ma Raadi sida aan halkaan u joognaa in dhammaan dhibaatooyin dhaqaale aad wax la soo dhaafay ka dhigi. Waxaan amaah lacag baxay shaqsiyaadka iyo ganacsiyada u baahan gargaar dhaqaale at heerka of 2%. No lambarka amniga bulshada looga baahan yahay oo mar jeeg credit loo baahan yahay, 100% damaanad qaaday. Waxaan rabaa in aan u isticmaalaan dhexdhexaad ah si aan kuu ogeysiinno, waxaan ka abaalmarin gargaar lagu kalsoonaan karo oo faa'iideystayaasha iyo waxaan ku farxi doonaan inay kuu soo bandhigi doonaa oo amaah ah.
Maanta email noogu soo dir: (jonessmithgo@gmail.com) inay hadda dalbato amaah ah.
Mrs Johnson Pauline November 14, 2016 at 4:03 AM
Ma waxaad raadineysaa taageero dhaqaale? Ma u baahan tahay amaah degdeg ah in uu bixiyo biilka ama deynta aad? wax kasta oo amaah ah waxaa laga yaabaa in ay tahay in aad nala soo xiriir maanta via email: paulinejohnson848@hotmail.com
Thomas Jefferson November 18, 2016 at 7:43 PM
Dr Purva Pius December 8, 2016 at 6:12 AM
ROBERT NIEMOELLER LOAN INVESTMENT CO. December 22, 2016 at 3:30 PM
Welcome to Robert Niemoeller Loan Services Investment, Waxaan bixinaa amaah ah 2% macaamiisha inneed ee nooc kasta oo amaah ah, ha ahaato amaah shakhsi ah, amaah ganacsi, amaah ardayga iwm, Haddii xiiso amaah ah, fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah ... nagala soo xiriir: robertniemoellerloan@gmail.com
Thomas Jefferson February 12, 2017 at 3:59 AM
Ma waxaad tahay qof ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale? Waxaad u baahan tahay amaah ah deynta
xoojinta, dhismaha, amaahda hantida maguurtada ah, maalgelinta shakhsiyeed
ama lacag degdegga ah isticmaalka ganacsiga? waxaad tahay ninkii ganacsi ama dumarka
qorsheenayeen inay balaadhiyaan ganacsigaaga, waxaan ku siin deyn dhammaan noocyada. Haddii
xiisaynayso, fadlan nala soo xiriir maanta dhex Email:
Loan dalab @ 3% hadda Nala soo xiriir,
1.Your Name Full
7.Your kaarka aqoonsiga sharci ah:
Company 9.Your Email Address / Personal Email Address.
10. Inta Loan.
email noogu soo dir: (beverlyloancompany2@gmail.com)
CEO / Thomas Jefferson AMAAHDA adag
louis messina March 12, 2017 at 3:13 PM
Ma waxaad maraya qaar ka mid ah stress dhaqaale iyo aad raadinayso si ay u yimaadaan ka dhibaatada soo baxay, Halkan waa Louis Messina si ay uga caawiso ka gudbaan stress dhaqaale oo noqday man.Mr.LOUIS Messina sharci iyo Dowladda ansixiyey wax amaahiya a faraxsan amaah gaar ah. Iyadoo qayb ka ah xirmada daryeelka ay bixinayaan nidaamka sabayn amaah ugu dulsaarka 3% aan ammaanka wax dammiin. Tani waa si ay u caawiyaan shakhsiyaadka gaaro ujeeddooyinka dhaqaale ay. Lacagta ugu yar ee aad ka amaahan kartaa waa $ 5,000.00 oo doolar ay ugu badan ee $ 500.Million. Waxaa naga go'an inaan adeegga macmiilka iyo hab cusub in xalinta dhibaatada ahayd goal.kindly kama dambaysta email noogu soo dhaqso,
Richard peterson July 28, 2017 at 3:22 PM
Ma waxaad doonaysaa kaalmo dhaqaale? Ma u baahan tahay amaah degdeg ah
inuu bixiyo biilasha ama deymaha aad? nala soo xiriir maanta via email:
Sarah Williams August 4, 2017 at 3:01 PM
Shirkad amaah Sky Adduunka, waxaan ku siin deyn heerka xiiso 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
maalin wanaagsan Sayidow / ma am.
Waxaan nahay shirkad gaar ah oo aan bixino deynta at dulsaarka hoose ee go'aaminta xaddiga amaahda waa inta u dhaxaysa 100 million qodobada heshiis amaah ah oo dhan $ 1,000 dollar oo amaah ah horumarinta ganacsiga: laayeen / ganacsiga tartan ballaarinta.
Waxaanu bixinaa noocyo kala duwan oo amaah ah
* Amaahda Personal (xaqiijisatay iyo shqsiga ah)
* Business Amaahda (xaqiijisatay iyo shqsiga ah)
* Loan Xoojinta
No ajuurada ku wehlin doona.
Waxaan aad ugu mahad naqayaa, waayo, waqtiga ay ku akhristaan ad this.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo weydiimaha, soo dir e-mail noogu maanta
Elizabeth Smith August 12, 2017 at 4:13 AM
Waxaanu nahay urur Masiixi ah oo loogu talagalay dadka ka caawiya baahida caawimada, sida kaalmo lacageed. Haddii aad ku jirto dhibaato dhaqaale ama aad ku jirto khasaare dhaqaale, waxaadna u baahan tahay lacag aad ku bilawdo ganacsigaaga, ama waxaad u baahan tahay amaah Dejinta deynta ama bixinta biilashaada, bilaw ganacsi fiican, ama aad adigu ku adagtahay inaad heshid deyn raasumaal ah oo ka timaada bangiyada maxaliga ah, nagala soo xiriir email maanta adoo adeegsanaya (deynta, bilawga lacag): sandraloancompany1@gmail.com Waayo, kitaabku wuxuu leeyahay "" Luukos 11:10 Qof kasta oo weydiisto wuu helayaa; Kii doonaana waa helaa; Oo kii garaacana waa la furay "haddaba yaanay ku sii faafin, waayo, Ciise waa isku mid, oo maalintaas ayaad mooday garanaysaan, maxaa yeelay, sidaasuu u hadlay. Si ay u helaan jidkooda.
Waxaad kugula talineysaa inaad buuxiso oo aad soo celiso faahfaahinta hoose.
Lacagta Lacagta Lahaa Lahaa: ______________
Waqtiga Deynta: ____________________
Dakhliga bishii: __________________
Lambarka taleefanka gacanta: ________________
Ma dalbatay deyn ka hor: ________________
Haddii aad dalbatay deyn ka hor, meesha aad si daacad ah ula dhaqantay? Halkee shirkadu ku yaal?
comfort frank August 15, 2017 at 5:17 PM
Ma u baahan tahay 100% Deynta? Waxaan u adeegi karaa baahidaada dhaqaale ee dhibaatooyinka yar ee soo noqoshada taas oo ah sababta aan kuugu maalgelino kaliya 2%. Wax kasta oo xaaladdaada ah, iskiis u shaqeysto, ka fariisto, ayaa leh qiimeyn credit kumbuyuutar ah, waan ku caawin karnaa. Flexiblerepayment ka weyn 1 illaa 30 sano. Nagala soo xiriir: comfortfrankloanfirm@gmail.com
Waxaad raadineysaa deymo dheer ama muddo gaaban
1 Magaca oo buuxa: ............................
2 Cinwaanka lala xiriirayo: .......................
3.Dadka Kale: .....................
5. Lacagta Deynta Loo Baahanyahay: ....................
6. Deynta Waqtiga: ...................
7. Lambarka Telefoonka tooska ah: .................
Greg Owen September 7, 2017 at 1:18 PM
Miyaad u baahan tahay waqti dheer, ama muddo gaaban amaah ah oo leh dulsaar hooseeya
sida ugu hooseysa 3%?
Waxaan bixinaa amaahda ganacsiga:
Amaahda oo dhan:
Amaahda isku darka deynta: e.t.c.
Wax dhib ah ma lahan dhibcaha credit.waxaa loo balan qaadayaa bixinta
Adeegyada maaliyadeed ee macaamiisha badan ee adduunka oo idil.
Iyada oo baakidhkeena amaahda ah ee dabacsan,
Lacagta amaahda waa la baari karaa waxaana loo wareejin karaa amaahda
waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Haddii aad u baahan tahay amaah degdeg ah nala soo xariir Emailka:
3% deyn lagu kalsoon yahay ayaa la damaanad-qaadayaa.
Diego Santiago October 10, 2017 at 1:25 AM
Aniga, Mr. Diego, waa deyn bixiye gaar ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku noolaato dhammaan noocyada amaahda. Miyaad u baahan tahay deyn deg-deg ah si aad dib ugu bixiso deymaha, mise waxaad u baahan tahay deyn raas ah si aad u hagaajiso ganacsigaaga? Ma waxaa diiday bangiyada iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed? Miyaad u baahan tahay in la isku daro ama dayn amaah guri? Waxaan lacag ka amaahsanaa dadka u baahan gargaar lacageed kuwaas oo leh deymo xun ama kuwa u baahan lacag si ay u bixiyaan biilasha iyo maalgashadaan ganacsiga dulsaar yar oo ah 2% marka la eego shuruudaha cad oo la fahmi karo. 100% ayaa la damaanad qaaday.
U dir email noogu soo dir (santiagoloanfirm@gmail.com) si aad u codsato.
felix george October 27, 2017 at 3:16 AM
Dhammaan welwelkaaga maaliyadeed
Waxaan leenahay shirkad la aqoonsan yahay. waxaan u deynaa shakhsiyaadka
dulsaar hooseeya oo ah 2%, Waxaanu bixinnaa deyn shakhsiyeed, deyn ganacsi,
amaahda guryaha. Amaahda guryaha ijaarka ah
ha ka waaban inaad nala soo xiriirto: (felixgeorge958@gmail.com)
smith jobs April 2, 2018 at 9:58 PM
Codso hab deg deg ah oo ku habboon bixinta biilasha iyo in la bilaabo maalgalin mashruuc cusub oo ah dulsaar raqiis ah oo ah 2% deyn. Nagala soo xiriir nagala soo xiriir: Smithjobsloanfirm@outlook.com oo leh qadarka amaahda ayaa lagama maarmaan ah in dalabkayaga amaahda ugu yar ay tahay 1,000.00 oo ah doorasho kasta oo deyn ah. Anigu waxaan haystaa shahaadada diiwaangelinta, diiwaangelinta iyo sharci bixiyaha. Waxaad ila soo xidhiidhi kartaa maanta haddii aad xiiseyneyso helitaanka deyntan, la soo xiriir aniga oo ila soo xiriir wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan habka amaahda, habka sida deynta iyo shuruudaha iyo sida deynta laguu wareejin doono. Waxaan u baahanahay jawaab degdeg ah haddii aad xiiseyneyso.
Rev. Fr. Kevin Doran April 10, 2018 at 3:09 PM
Ma u baahan tahay deyn ganacsi si aad u balaariso ganacsigaaga? Miyaad leedahay credit credit xun oo aad rabto inaad xalliso? U diyaari deyn hadda annaga nala helno ansax ah. Waxaan deyn u siineynaa kuwa ku jira diiqadda maaliyadeed iyo sidoo kale kordhinta ganacsiga. Nagala soo xiriir annaga oo ansixino. Waxaan bixinaa dhammaan noocyada amaahda sida deyn shakhsiyeed, amaahda ganacsiga, amaahda amaahda amaahda, amaahda guriga iyo deyn bixinta. Nagala soo xiriir cinwaanka emailkaaga (consumerloanfirm@gmail.com)
Cit group inc May 2, 2018 at 1:15 PM
Collins Guzman June 19, 2018 at 3:43 PM
george June 30, 2018 at 9:24 PM
Deynta amaahda maanta ku hesho qiime hooseeya ayaa hadda la bixiyaa amaahda waxaa lagu bixiyaa qiime ahaan 2% hadda ayaa tani waxay kordhin kartaa ganacsigaada si aad u sareeya. Waxaanu kuugu deeqaynaa Deymaha ganacsiga iyo shakhsiyaadka, haddii aad u baahan tahay Deynta si aad u bilowdo ganacsi ama Deynta si aad u bixiso biilasha ayaa nagala soo xiriiri (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) hadda oo ka hel Shahaadada Shirkadeena ... Waxaan bixiyaa adeegga amaahda ugu fiican.
Unknown July 1, 2018 at 5:38 PM
Ma u baahan tahay wax deyn ah? Waxaan nahay shirkadda amaahda ugu dhaqsaha badan aduunka. Halkan waa fursaddaada inaad ka heshid shirkad nooca dulsaarka ah 2%. Daymankayagu waa la sugayaa waana la sugayaa. Amaahda degdegga ah ee wax ku ool ah. Nagala soo xiriir maanta haddii aad hadda u baahan tahay dalab amaah ah. Fadlan noo soo noqo haddii aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho email-kaaga si aan u helno deyn: helendanielsloanfirm@gmail.com Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto geesiga runta ah, kalsoonida iyo shirkada amaahda waxtarka leh ee deyntaada. Waxaan soo dhaweynayaa shakhsiyaadka iyo dowladda labadaba si aan waxtarka weyn ugu hello Si aad u hesho deyn, fadlan soo noqo haddii aad jeceshahay inaad isticmaasho emailkayaga: helendanielsloanfirm@gmail.com
loan July 17, 2018 at 4:35 AM
loan July 17, 2018 at 4:36 AM
Mrs. Elizabeth July 21, 2018 at 5:07 AM
Hello, Miyaad u baahan tahay waqti dheer, ama muddo gaaban ama deyn ah oo leh dulsaar yar oo hooseeya illaa 2%? Dhibaatada dhaqaaluhu ma saameeyaa sanadkan? Anigu waxaan ahay Mrs Elizabeth, aniga oo ah milkiilaha shirkad amaahda iyo waxaan siinayaa amaah iyo amaan ah.
* Miyaad raadineysaa miisaaniyad aad ku bixiso dhibcaha iyo deymaha?
* Ma raadineysaa dhaqaale si aad u sameyso ganacsigaaga?
* Ma u baahan tahay amaahda ganacsiga gaarka ah ama ganacsiga ujeedooyin kala duwan?
* Ma waxaad raadineysaa amaahda si aad u fuliso mashaariic waaweyn?
Haddii jawaabtaadu haa tahay, waxaan kaa caawin karaa.
* Waxaan ku siin karaa ilaa € 100,000,000 Euro.
* Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa 1 ilaa 30 sano si aad dib ugu bixiso.
* Waxaad dooran kartaa inta u dhaxeysa bil kasta iyo Qorshaha Dib u bixinta Sanadlaha ah.
* Shuruudaha Lacagta Dheeriga ah.
Fadlan haddii aad xiiseyneyso dib u fiiri cinwaanka emailkan:
Waxaad haysataa 100% damaanad ah in lagu siin doono amaahda dhamaadka deyntan.
Credit Loan August 9, 2018 at 5:18 AM
Fool ka fool Heersare iyo Fadhfadhle
Dhaqdhaqaaqa Ictiraaf-dhabaynta Ee Oslo
Hargeysa: Caasimad Dhismaysa Oo Bilic U Baahan + S...